के साँच्चै बिहे गर्दैछिन त नायिका स्वेता खड्का? हेर्नुस् वास्तविकता! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > के साँच्चै बिहे गर्दैछिन त नायिका स्वेता खड्का? हेर्नुस् वास्तविकता!
के साँच्चै बिहे गर्दैछिन त नायिका स्वेता खड्का? हेर्नुस् वास्तविकता!
admin November 5, 2020 जीवनशैली, मनोरञ्जन, समाचार	0
अभिनेत्री स्वेता खड्काले बिहे गर्न लागेको खबरले यतिबेला फिल्मी जगत निकै तातेको छ ।केही दिनयता स्वेताको बिहेबारे खबर गसिपका रूपमा चर्चामा आएको हो । अहिले यो विषयले थप प्राथमिकता पाउँदै गएको छ । यस विषयले चलचित्र उद्योग तरंगित बनेको छ ।दशैंको टीका लगाएका बेला एक युवकसँगको तस्वीर सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिएपछि स्वेताको बिहेबारे खबर एकाएक भाइरल हुन पुगेको हो ।
दशैंका बेला सार्वजनिक तस्वीर कसको हो ? **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
साउदीमा काम गर्ने नेपालीहरूकाे लागि आउँदै यस्तो खुशीकाे खबर
सं,कटकाल लगाउन संसद अधिबेशन अन्त्य गरे ओलिले ! सम्पुर्ण शक्ति प्रधानमन्त्रीमा निहित (प्रचण्ड सहित नेता तनाबमा )
भर्खरै केपी ओलीले दिए ३ करोड नेपाली जनतालाई अहिले सम्मकै खुसीको खबर